Nagu Saabsan - Weifang Zhicheng Machines Co., Ltd.
1GNQ Taxanaha Rotary Tiller
Socodka Tractor Rotary Tiller
4 Gawaarida 2WD Mini Tractor
4 Gawaarida 4WD Mini Tractor
Mashiinka Quudinta iyo Bacrinta
Qalabka Maaddada Hoosaadka
Mashiinka Gubashada Canab
Qalabka Co., Ltd.
Weifang Zhicheng Machines Co., Ltd.
Weifang Zhicheng Machines Co., Ltd. waxay ku taalaa magaalada caanka ah ee quruxda badan ee dunida-- Weifang City, Gobolka Shandong .Laqan gasho warshadaha Junbukou, gaadiidkuna aad ayuu u habboon yahay.
Waxaa la asaasay 2009. shirkaddu waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh iyo tikniyoolajiyadda qalabka oo horumarsan, badiyaa waxay soo saartaa cagafyo yaryar, cagaf lugeynaya, mashiinka wareega, mashiinka qodista, mashiinka qodista dheer, mashiinka soo celinta cawska, alaabada kale ee beeraha.
Shirkadda waxay gudubtay nidaamka maaraynta tayada 1SO iyo shahaadada CE.
Waxaan had iyo jeer u hoggaansannahay mabda'a "tayada koowaad, macaamiisha marka hore", oo leh dabeecad cilmiyaysan iyo adadag, ujeedo iyo hal-abuur cusub, oo si joogto ah u socda. Waxaan adeegsanaa iibka iibka ka dib waxaanan xoojineynaa kooxda adeegga, si aan waqtiga ugu habboon oo waxtar leh u siino macaamiisha cusub iyo kuwii hore si ay u siiyaan badeecado iyo adeegyo wanaagsan.
Wadashaqayn daacadnimo ah oo lala yeelato ganacsato gudaha ah iyo shisheeye, gacan gacanta ku hayaan, abuuro qurux badan.
Soosaaraha Xirfadlaha Ah Iyo Hogaamiyaha Warshadaha Beeraha
Waxaa jira wax kabadan 10 nooc oo soosaar horumarsan iyo qalab tijaabin ah oo hubinaya tayada waxsoosaarka, Waxaan sidoo kale leenahay koox farsamo yaqaan ah xagga qaabeynta iyo soo saarida kuwaas oo buuxin kara shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, waana sababta aan u taageeri karno khadka wax soo saarka OEM. Waxaan bixinaa 24ka saacadood ka hor iibka iyo gadaasha gadaal-gadaal waxay taageeraan, si loo hubiyo isgaarsiinta waqtiga ka dhaxeysa macaamiisha iyo anaga. Waxaan kaloo xiriir adag la samaynay South America, Yurub, Aasiya, iyo waddamada Afrika .Waxaan horumarinaa ugu yaraan 2 nooc oo noocyo cusub ah sanadkasta si aan ula kulanno suuqa adduunka. Warshaddeenu waxay ku taalaa Weifang City, gobolka Shandong, oo 180km u jirta dekedda Qingdao, isla mar ahaantaana waxaa jira garoonka diyaaradaha Weifang oo u dhow warshaddeenna, sidaa darteed, aad bay ugu habboon tahay macaamiisha inay booqdaan, iyagoo rajeynaya inay iskaashi la yeeshaan!
Cinwaanka Warshadaha: Tuulada shaowengmiao, Magaalada Junbukou, Degmada Weicheng, Weifang City, Shandong, Shiinaha
Cinwaanka Xafiiska: Room1608, Dhismaha Jintai, Woqooyi-galbeed ee Isgoyska Dongfeng West Street iyo Wadada Changsong, Degmada Weicheng, Weifang City, Gobolka Shandong
Emayl: jannet@sincerelymach mach.com
Taleefanka Xafiiska: 86-0536-2100684
Telefoonka gacanta: 0086 18764704890